Beyond asxaabta - Dhisida Iibka Channel
Beyond Associates - Dhisida Iibka Channel
Khamiis, Agoosto 5, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Nick Carter
Aniga oo ah milkiile ganacsi, kuuma sheegi karo inta jeer ee aan ku soo dhawaado fursad aan ku sameeyo lacag dheeri ah ama laba dakhli oo ku xiran. Haddii aan uun u isticmaali doono shaashaddayda inaan ku xeroodo alaabtooda, lacag bay isiinayaan. Iyo, intaas ka dib, ilaa iyo inta qof i siiyo lacag waxaan ku dhiirrigeliyaa inaan sameeyo… sax? Khalad
Haddii aad cadaab ku foorarsan tahay dhisida nooc iib ah oo ku saleysan gacansaar, badbaadi naftaada waqti yar oo aad tag meesha ay ku xiran yihiin. Clickbank, Xubinta Guddiga, ama wixii lamid ah. Iyo, ma garaacayo tusaalahaas. Way shaqaysaa. Waa faa'iido. Waxaana jira shakhsiyaad xirfad iyo xiiso u leh fursadda noocaas ah. Waxay unaba dhacdaa inaysan had iyo jeer isku mid ka ahayn milkiilayaasha ganacsiga guuleysta ee leh shirkado faa iido abuuraya oo iyaga u gaar ah.
Sababo kala duwan awgood, oo badiyaa lala yeesho sawirka astaanta, iibinta ku-xirnaanta ma ahan waxa aad raadineyso dhammaantood In kasta oo ay natiijooyin heli karto, waxay la imaan kartaa sumcad. Haddii aadan rabin inaad aragto badeecadaada oo ku xiran boqolaal bogag isku mid ah oo isku buuqsan oo leh nuqul dhaadheer oo la buunbuuniyey, oo lagu riixay daaqadaha twitter-ka chock oo ay ka buuxaan xiriiriyeyaal xiriir la leh, ama lagu khiyaameeyay malaayiin dad ah - oo dhammaantood magacaagu ku qoran yahay - markaa waxaa laga yaabaa inaad tixgeli hab ka duwan.
Caqabada, markaa, waa sidee ayaad kuheleysaa meherado “sumcad leh” (oo waxaan u adeegsadaa ereygaas si shaki la’aan ah, maadaama aanan ula jeedin macnaheedu in shirkadaha raacsan yihiin sumcad xumo sumcad xumo) inay wakiil uga noqdaan badeecadaada qaab ganacsi aad u muxaafid ah? Jawaabtu: hel waxa ku dhiirrigeliya.
As Douglas Karr ayaa ku muujiyay qoraal dhawaan, anigoo tixraacaya mid ka mid ah fiidiyowyada fayraska aan ugu jeclahay, lacagtu had iyo jeer jawaab ma ahan. Xaqiiqdii, waa dhif. Xaqiiqdii, waa dalab aad u badan oo lacag ah, iyo wax intaa ka badan, taas oo run ahaantii igu kicinaysa inaan ka fiirsado dalabyada ku xiran. Saameyn ahaan, waxay aflagaadeyneysaa qiimahayga gaarka ah, dareenkeyga qofka aan ahay iyo waxa aan sameeyo, anigoo u maleynaya inaan ka mashquuli karo howlahaydii ganacsi ee marki horeba cunay anigoo adeegsanaya lacag fudud.
Marka, sidee u dhisi kartaa waxaan ugu yeeray "Iibinta Channel" –oo ah qaab qaybsi aan toos ahayn oo ka sii adag (haa, ka sii badan aad u sarreeya) marka loo eego xulafada? Sidee ku ogaan kartaa waxa dhabta ah ee dhiiri gelin kara milkiile ganacsi oo aad jeceshahay inaad la wadaagto? Fudud: waa shaqadooda.
Ganacsatadu waxay ku dadaalaan si aan dhammaad lahayn u kobciyaan shirkadooda. Riyooyin ayay niyada ku hayaan - qaar lacag ah, qaar danayste ah, qaarna madadaalo iyo abaalmarin caadi ah. Haddii aad rabto inaad ku dhejiso xiisahaas oo aad u isticmaasho kobaca iibkaaga, waa inaad isku toosisaa labada. Muuji sida ku soo biirista kanaalkaagu aanu ku dari doonin oo keliya waxoogaa lacag ah oo komishan ah xaruntooda hoose, laakiin dhab ahaantii ka caawin doonta inay ganacsigooda u kaxeeyaan waxa ay aadka u doonayaan.
Waad arki kartaa maamulahaas oo u shaqeeya in badan oo ka mid ah moodooyinka iibinta kanaalka guuleysta maanta. Wakaaladda xayeysiiska, tusaale ahaan, waa tusaale meesha ay daabacayaashu ku doonayaan inay ku buuxiyaan waxyaabaha la gelinayo, laakiin waxay garwaaqsanayaan hamiga hay'adda inay tahay xalka hal-abuurka. Daabacayaasha wax ogaada waxay raadiyaan siyaabo lagu kordhiyo himiladaas. Shaqadaydii ugu horreysay waxay ahayd iibinta barnaamijka softiweerka ah ee 'Autodesk VAR' maxalliga ah. Waan la yaabay sababta Autodesk ugu soo dallacday laba jibbaar heerka adeegga, illaa aan ka gartay inay doonayeen inay ku dhiirrigeliyaan macaamiisha si kasta oo ay suurtagal u tahay inay ku lug yeeshaan VAR-ka maxalliga ah adeegyada. Xitaa aniga iska leh Bixiye Wadaage barnaamijku wuxuu ku dhisan yahay wixii aan ka bartay faa'iidooyinkan, iyo kuwa kale.
Dhisidda kanaalka iibka ma sahlana, waana dhif iyo naadir in si dhakhso ah loo socodsiiyo. Haddii aad rabto si dhakhso ah oo fudud, hel shirkadaha ku xiran dhinacaaga. Haddii aad maskaxda ku hayso wax ka badan lacagta, markaa garoow sidaas oo kale annaguna waan haynaa.
Tags: marketing affiliateAutodeskautodesk vardhismaha kanaalka iibkaiibinta kanaalka dhismahaiibinta kanaalkaClickbankisgoyska komishanka
Aynu Soo Bandhigno oo Aan Qiyaasno Asturnaanta
Agoosto 5, 2010 saacaddu markay ahayd 8:39 PM
Farriin weyn, Nick! Oo aan ku soo dhaweyno blog-ka Teknolojiyada Suuqgeynta. Waxaan aaminsanahay hal qalad oo weyn oo shirkado badani sameeyaan inaysan lacag kahelayn shabakadaha cajiibka ah ee iibiyeyaasha iyo cilaaqaadka ay horey u lahaayeen. Dhisida cilaaqaadka iibka ee lagu abaalmariyo dadka aad wax ka iibsato iyo sidoo kale macaamiisha aad la shaqeysid waxay noqon karaan kuwo miro dhal badan marka loo eego inaad si fudud u tuurtid barnaamij xiriir la leh halkaasoo shaqsiyan uusan wax maqaar ah ku laheyn ciyaarta.
Agoosto 12, 2010 saacaddu markay ahayd 12:34 PM
Farriin weyn! Shirkadeena, Channel Services Group (CSG) waxaan ka qornay kumanaan la-hawlgalayaal kanaal shirkadaha waaweyn ee tikniyoolajiyadda. In la abuuro lana kobciyo kanaal guuleysta, xoog leh, heegan ah ayay shirkadeenu heshay inay shaqaalaysiinayso "lamaanayaasha saxda ah," taasoo u saamaxaysa guusha lammaanaha iyo joogtaynta kaqaybqaadashadu inay kordhiso waxqabadka lammaanaha iyo dhaqanka kanaalka.
Inta ay shaqaalaysiinayaan, iibiyeyaashu waa inay hubiyaan inay waqtigooda si caqligal ah ku qaataan iyagoo qoraya “lamaanayaasha saxda ah” Waxaan aragnay dhowr shirkadood oo go'aan ka gaaraya hadafka ah in lagu daro wada-hawlgalayaasha muddo sannad ah, la helo hadafka, oo ay sannad ka dib iska helaan dakhli yar oo ka soo gala lamaanayaasha cusub ee la soo kordhiyay. Iibiyeyaashu waxay u baahan yihiin inay hubiyaan inay qoranayaan la-hawlgalayaal shirkad kuu ah oo danta ugu weyn ay ku jirto oo doonaya inay iska diiwaangeliyaan faa'iidooyinka muddada-dheer ee shirkadda.
Intaas waxaa sii dheer, iibiyeyaashu waxay u baahan yihiin inay awood u siiyaan guusha lamaanaha iyagoo ansaxinaya sababta lamaanayaasha ku jira barnaamijka. Tan waxaa ka mid ah wada-xiriir sare oo lala yeesho la-hawlgalayaasha si loo tababaro, loola macaamilo loona hago la-hawlgalayaasha ololayaasha suuqa, dhacdooyinka iibiyeyaasha ay kafaala qaadaan, ololeyaasha wacyi-gelinta iyo dardargelinta wareeggooda iibka. Waxaan dhowaan qornay daraasad kiis oo leh ROI of 14X taas oo ka dhalatay dhismaha barnaamijka kanaalka. Waxaad ka akhrisan kartaa halkan http://www.csgchannels.com/CaseStudies/case-studies.html.
Ugu dambeyntiina, shirkadeena ayaa heshay helitaan si aan caadi aheyn muhiim ugu ah dhismaha iyo dayactirka kanaalka. Tan waxaa ka mid ah kobcinta xiriirka iyaga iyo adoo maareynaya guushooda. Wada-hawlgalayaasha waa in lagu abaalmariyaa dhiirigelinno lagu xoojinayo yoolalka shirkadda.
Sidaad tilmaantay, dhisida kanaalka iibka ma sahlana oo waa dhif iyo naadir waa dhaqso, laakiin waxay noqon kartaa mid abaalmarin iyo faa'iido leh marka si sax ah loo qabto.
Agoosto 12, 2010 saacaddu markay ahayd 3:48 PM
Qodobbo waaweyn. Wada-hawlgalayaasha saxda ah ma aha oo kaliya wax soo saar badan, waxay ka yar yihiin xanuunka. Anigu ma sharixi karo, laakiin waxaan ogaaday in marka qof si fiican ugu habboon tusaalaha, ay ka yareeyaan xanuunka. Kii aan isku daynay inaan ku tuujinno qaab khaldan wuxuu ku dhammaaday waqti badan.
Sidoo kale, anigoo ka hadlaya barnaamijyada taabashada sare… Waxaan u iri sidan: ganacsigeyga, waxaan ku leeyahay 17 macmiil oo aan u baahanahay inaan u adeego. Maaha wax kadis ah inaan haysto 17 Bixiyeyaal Wada-hawlgalayaal ah. Maaha inaanan u baahnayn inaan u adeego dhammaan dadka isticmaala 1500, waa uun haddii aan u adeego kanaalka, inta kale way is daryeelayaan.